धनी नेता बचाउँनलाई सरकार छ, गरिब जनता बचाउँने को छ ? – America Nepal
Sunday, November, 2016
धनी नेता बचाउँनलाई सरकार छ, गरिब जनता बचाउँने को छ ?
मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार साँझ सुजता कोइरालाको उपचारका लागि पचास लाख दिने निर्णय गर्यो । नेताका लागि यो कुनै ठूलो रकम हुँदै होइन । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको उपचारका लागि मात्र १७ करोड खर्च भइसकेको छ । एमालेको कोषमा करोडौँ छ । ओली आफ्नैपनि करोडौँको सम्पत्ति छ । तर, ०५२ सालदेखि यिनको उपचारमा सरकारले लगानी गरिरहेको छ । सिटामोलदेखि भीड छल्नका लागि गरिएको सिंगापुर सयरसम्म सरकारकै थाप्लोमा पर्दै आएको छ । नेपालमै उपचार सम्भव हुँदाहुँदै पूर्वराष्ट्रपति रामबरण यादव अमेरिकाबाट उपचार गरेर फर्किएका छन् । परिवारका सदस्यसमेतलाई डलरमा भत्ता दिलाउने व्यवश्था गराएर उनी अमेरिका हानिएका थिए । उनी आफैँ डाक्टर हुन्, छोरासमेत डाक्टर हुन् । जग्गाजमिनवाला हुने खाने यादवले जीबनको उत्तरार्धमा आफ्नो ओझ घटाउने गरी राज्यसँग उपचार खर्च लिइरहेका छन् । उपचारका लागि जग्गा बेच्न खोजेकी सुजतालाई त्यस्तो कुकर्म नगर्न सुझाउँदै सरकारले उपचार खर्च दिलाएको छ । दशौँ करोडकी मालिक सुजताको सानो टुक्रा जग्गा जोगाउन सरकारले ठूलै आलोचना खेप्न तयार भएको छ । उनका लागि दिइएको यो पहिलो किस्ता हो । उनको माग १ करोड रहेको छ ।
माथिका दृष्टान्तले भन्छ : सरकार धनी नेताका लागि मन खुला गरेर खर्च गर्न तयार छ । तर, गरिव जनताको बेहाल छ । कालिकोट सिपखानाकी यि बालिका मृत्युसँग जुँधिरहेकी छिन् । कुपोषणका कारण अस्तिपञ्जरमा परिणत भएकी ११ महिने यि बालिकाको तौल ४ किलोमात्रै छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डा। कौशर अलीका अनुसार बालिकाको अवस्था नाजुक छ ।
चर्चित युवा नेता गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री छन् । उपचारको अभावमा कुनै नागरिक मर्न नपर्ने दिनको सुरुवात भएको घोषणा गरेका थापाका कता छन् ? बालिकाको तस्बिर आफैँमा प्रश्न बनेको छ । दुई छोरीका बाबु गगनलाई जनताकी छोरीको यो तस्बिरले छुँदो हो कि ? प्रश्न पेचिलो छ ।
धनी नेता बचाउँनलाई सरकार हरदम तयार छ । यि किशोरीलाई बचाउँने दायित्व अब हामी नागरिकको काँधमा आइलागेको छ । आउनुहोस्, यिनको उपचारका लागि अभियान थालौँ ।